Abenzi Besistimu | I-China System Factory & Abahlinzeki
UHF RFID Isango Abantu Ac ...
Uhlelo lwe-EAS RF EAS 8.2mhz RF ...
Isitolo se-EAS Retail 58khz AM C ...
EAS Antenna AM Uhlelo Acryl ...
UHLELO LUKA AM System Acryli ...
I-EAS RF Security Scanner Gate Alarm Door Alumium Alloy Antenna-A209
Uhlelo lwe-Optimum RF EAS uhlelo olusebenza ku-8.2 MHz. Kutholakala njenge-Mono noma i-Dual System, womabili amasistimu abelana ngomklamo wephrofayili ephezulu ohlanganiswe nekhwalithi.Isebenza futhi izwe wonke amathegi anzima okuphepha e-RF 8.2MHz namalebula we-EAS athambile, ngakho-ke ilingana nazo zonke izinhlobo zezitolo zokuthengisa, ze isibonelo, izitolo zezingubo zokugqoka, izitolo zezicathulo, izitolo zezidakamizwa nokunye.
Igama lomkhiqizo: ETAGTRON
Inombolo imodeli: A209
Uhlobo: EAS RF uhlelo
Ubukhulu: 1660 * 420 * 42MM
Umbala: Aluminium Ingxubevange
I-Voltage Yokusebenza: 110 ~ 230V 50 ~ 60HZ
Uhlelo lwe-EAS RF RF EAS 8.2mhz RF Security Supermarket Door Antenna-PG308
Ihlanganiswe nomzila we-RF wohlelo lwakudala, ukumunca ingqikithi yesekethe yokucubungula yedijithali, umkhiqizo ongabizi kakhulu. Futhi le modeli ye-RF acrylic ingahambisana nebhodi ehlukile ye-RF PCB. Ikakhulukazi, ama-Red Colour LED's ahlanganisiwe - angasethelwa unomphela noma lapho kuphela i-antenna ithukile- ilungele labo abathengisi abafuna ukwakheka okuphezulu ngaphandle kokunikela ngokusebenza. Kuyinto antenna yethu ethandwa kakhulu ye-RF. Ukufakwa kwayo okulula, okunembile, kokuthola kahle ukusebenza kahle, ukuzinza okuhle, izici zokuhluleka ezingeni eliphansi kuyenza ilingane ngaphandle komthungo ezindaweni eziningi.
Inombolo Model: PG308
Ubukhulu: 1518 * 280 * 20MM
Umbala: Ukungafihli lutho
Isitolo Sokuthengisa se-EAS 58khz AM Isitolo Sezingubo I-Alarm Anti-theft Aystem Gate-PG400
Uhlelo olugcwele, olunamandla lwe-AM olwenzelwe ukugxila ekutholeni okuqinile kwamalebula wokunamathela, ukuthembeka, nokuguquguquka. Lolu hlelo lwe-pedestal AM lufanele noma iyiphi imvelo, ngokusebenza okuphezulu emakethe yezokuphepha.
Uhlelo lwe-AM luhamba phambili eminyango emikhulu noma eminingi lapho lwenza kangcono kakhulu izimbangi zalo, futhi kanye nohlaka lwe-ABS lwesimanje luqinile kepha luyathandeka ngobuhle, lunendawo yamabhanela ezikhangiso.
Inombolo imodeli: PT309
Uhlobo: EAS AM uhlelo
Ubukhulu: 1560 * 420 * 20MM
I-EAS Antenna AM System Acrylic Ikhwalithi ephezulu ye-eas 58KHz Isitolo Sezingubo Zokuphepha Isango-PG212A
Idizayini yabo ekhangayo nobuchwepheshe obuvelele bedijithali benza uhla lwethu lwezimpondo lube yisixazululo esithandwa kakhulu emakethe yezidingo zokuphepha zokuthengisa. Izimpondo zethu ziqinile, zakhiwe kahle futhi ziqinile ngokwanele ezindaweni ezifuna kakhulu ukuthengisa.
Inombolo yemodeli: PG212A
Ubukhulu: 1500 * 370 * 20MM
EAS Alarm Security AM 58khz EAS Anti theft System Clothing Stores Antenna-PG218
Lolu hlelo lwe-EAS ubuchwepheshe be-AM 58KHz obunezici zokutholakala okubanzi (kufika ku-2.5 m) nokuzwela okuphezulu. Idizayini yayo esobala futhi evulekile ifanelekile ekwakhiweni kwesitolo okuletha ukufinyeleleka kokulula nokwethenjelwa kwesisombululo esikhangayo, esingabizi se-EAS.Imininingwane yento
Inombolo yemodeli: PG218
Ubukhulu: 1500 * 340 * 20MM
Isitolo se-EAS Retail 58khz AM Isitolo Sezingubo I-Alarm Anti-theft Aystem Gate-PT309
Lolu hlelo lwe-AM lusebenza kumgomo wokuthi umthumeli uthumela isignali ngokuqhuma okunika amandla amathegi ngaphakathi kwendawo enezisekelo. Lapho ishayela liphela, ithegi iyaphendula. Phakathi kokuqhuma, isinali lomaki litholwa ngumamukeli. Ngakho-ke, uma umaki osebenzayo udlula phakathi kwezisekelo, i-alamu izokhala.
UHLELO LWE-EAS AM Acrylic Ikhwalithi ephezulu ye-eas 58KHz Isitolo Sokuphepha Sezokuphepha Isango-PG300
Into imakiwe noma ifakwe ilebuli kanti i-antenna elilodwa noma amaningi, ngokuvamile abekwe eduze kokuvulwa kwesitolo, axhumane nawo uma eza ebangeni, axwayise ukuphathwa kwesitolo lapho othile ezama ukususa into esitolo ngaphandle kokuyicubungula kahle.
Inombolo yemodeli: PG300
Ubukhulu: 1500 * 306 * 20MM
Uhlelo lwe-EAS Antenna Clothing Store Security Anti-theft Alarm ye-AM 58khz EAS Antenna-PG200
Lolu hlelo lokutholwa lufaka ubuchwepheshe be-Etagtron AM EAS bezinga eliphakeme kakhulu lokutholwa kokwebiwa kuze kufike ku-2.5m (8ft 2in) ukumbozwa kokuphuma okubanzi noma okuningana.Umklamo wayo omncane, omncane, ovulekile wakhiwe nge-acrylic esezingeni eliphakeme, egcina isitolo i-aesthetics futhi iletha ukubukeka okulungile cishe nganoma yisiphi isethingi yokuthengisa.
Inombolo Yemodeli: PG200
Ubukhulu: 1500 * 200 * 20MM
Umbala: grey / white
Isango le-UHF RFID le-People Access Control kanye ne-Asset Tracking-PG506L
Ama-Antena we-RFID anesibopho sokukhipha nokwamukela amagagasi asivumela ukuthi sithole amachips e-RFID. Lapho i-chip ye-RFID yeqa inkambu ye-antenna, iyasebenza futhi ikhiphe isignali. Izimpondo zakha izinkambu ezihlukene zamagagasi futhi zimboza amabanga ahlukene.
Uhlobo lwe-Antenna: Izimpondo zokuhlukaniswa okuyisiyingi zisebenza kangcono ezindaweni lapho ukuma kwethegi kuyehluka khona. Ama-antenna wokuhlukaniswa komugqa asetshenziswa lapho ukuma kwamathegi kwaziwa futhi kulawulwa futhi kuhlala kufana. Ama-antenna e-NF (Near Field) asetshenziselwa ukufunda amathegi e-RFID ngaphakathi kwamasentimitha ambalwa.
Inombolo imodeli: PG506L
Uhlobo: Uhlelo lwe-RFID
Ubukhulu: 1517 * 326 * 141MM
I-Lab Tag Deactivator Yezokuphepha Ye-AM 58Khz EAS AM Label-CT580
Hlola umugqa wethu ophelele wama-deactivators anokwethenjelwa aletha ukusebenza kokuqeda okuphezulu kumalebula asebenzayo wokulwa nokweba ukusiza ukuvikela okuthengiswayo nokunciphisa ama-alamu angamanga lapho uphuma.
Inombolo Model: CT580
Uhlobo: AM Label Deactivators
Ubukhulu: 230 * 200 * 78MM
Umbala: Okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama
Ukunikezwa Kwamandla: Ukufaka 220VAC, Okukhipha i-18VAC
Ikheli:I-RM101, ipaki yokudala yaseYuzhou, No.3409 Jinghong Road, esifundeni iMinhang, eShanghai (201108)
Ucingo:0086 21 64953088-826
© Copyright - 2010-2021 Etagtron, Inc.: Wonke Amalungelo Agodliwe.